४३ दिनमा सकियो ऋषिराजको ‘चुरीफुरी’ ! « Filmy Nepal
४३ दिनमा सकियो ऋषिराजको ‘चुरीफुरी’ !
Published On : 22 February, 2021 9:14 am
कथाको मागअनुरुप नै फिल्ममा नयाँ तथा हाँस्य ब्याङ्ग्य क्षेत्रका कलाकारको बाहुल्यता रहेको निर्देशक आचार्य बताउछन् । चर्चित मोडेल अभिषेक श्रेष्ठले हिरोका रुपमा डेब्यु गरेको ‘चुरीफुरी’ को सम्पादन नवीन निरौलाले गरिरहेका छन् । नवप्रतिभाहरु अडिसन मार्फत छनौट गरिएको बताउदै निर्देशक आचार्यले ‘चुरीफुरी’ को प्रदर्शन मिति केही समयमै तय गरिने जानकारी दिए ।
‘कृष्ण लीला’ गीत रिलिजः श्रद्धासँग पुष्पको छमछमि |भिडियो
फिल्म ‘कृष्ण लीला’को नयाँ गीत रिलिज भएको छ । निर्माण टिमले शुक्रबार उक्त फिल्ममा समावेश
फिल्म ‘आँधी तुफान २’ निर्माण घोषणा भएको छ । बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच
उपासनाले गरिन् एजुकेसन एण्ड माइग्रेसन कर्नरको नयाँ शाखा उद्घाटन
अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीले एजुकेसन एण्ड माइग्रेसन कर्नरको नयाँ शाखाको उद्घघाटन गरेकी छन् । ठकुरी
कन्फर्मः स्वस्तिमाले साइन गरिन् साउथ फिल्म ‘थिरिमाली’
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का दक्षिण भारतिय फिल्म ‘थिरिमाली’मा आवद्ध भएकी छिन् । कलाकार छनोटसँगै लोकेशनको खोजीमा
सोनालसँग मलिकाको बिहेः कति जम्यो केमेष्ट्रि ? |भिडियो
'कृष्ण लीला' गीत रिलिजः श्रद्धासँग पुष्पको छमछमि |भिडियो
पुष्पनको 'काली' रिलिजः स्वस्तिमा र नाजिरको उत्कृष्ट प्रस्तुति |भिडियो
© 2021 Filmy Nepal